N'ogbe Women ukporo akpa, Japanese na Korean style inyom ukporo akpa, Women akpa, Commuter akpa, ịchọ mma akpa emepụta na suppliers - Dongguan Yihua Akpa Co., Ltd
Akpụkpọ anụ ubu ozi akpa
Nchekwa ịchọ mma akpa
Woolen Jirinụ akpa
Dongguan Yihua Akpa Co., Ltd.
Companylọ ọrụ anyị debara aha Dongguan Tianqin Packaging Products Co., Ltd. na 2010, nke kachasị na-arụpụta ụdị ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa niile; na 2020, anyị ga-azụlite azụmaahịa akpa aka ma guzobe Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd. iji mepụta ngwaahịa dị iche iche ịkwa akwa; enwere ike ịhazi ya dịka ihe achọrọ iji gosipụta na imepụta akpa aka dị iche iche, akpa ịchọ mma, akpa akụrụngwa, akpa ubu ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, akpa ezumike, wdg; na elu àgwà, na ngwaahịa na-tumadi exported na Europe, America, Japan, Korea na ebe ndị ọzọ.The factory emi odude ke ụwa n'ichepụta isi obodo-Dongguan. Factorylọ ọrụ ahụ nwere ụdị ngwa ọrụ ọ bụla. Ọ na-enye a nkwụsị ọrụ site na mmalite sample imewe na proofing ka ufọt ufọt okwu zuo na mmepụta ka e mesịrị okokụre ngwaahịa Mbupu.